Iwu nke anọ na nke ikpeazụ nke pụrụ iduzi echiche gị bụ Nkwanye ùgwù maka Iwu na Mmasị Ndị Mmadụ. Ụkpụrụ a sitere na Menlo Report, n'ihi ya kwa, ndị ọkachamara na-elekọta mmadụ enweghị ike ịma nke ọma. Mgbakọ Menlo na-arụ ụka na ụkpụrụ nke Ịkwanyere Iwu na Mmasị Ọha Mmadụ dị na ụkpụrụ nke Uru, ma ọ na-ekwukwa na onye mbụ kwesịrị ichebara echiche. Karịsịa, mgbe Beneficence na-elekwasị anya na ndị so na ya, Nkwanye ùgwù maka Iwu na Mmasị Ọha Mmadụ na-agba ume ka ndị na-eme nchọpụta gbaa mbọ hụ echiche zuru oke ma tinye iwu n'usoro ha.
Na Report Menlo, Ịkwanyere Iwu na Mmasị Ọha Mmadụ nwere ihe abụọ dị iche iche: (1) nnabata na (2) ngosipụta ziri ezi. Nkwado pụtara na ndị na-eme nnyocha kwesịrị ịnwa iji chọpụta ma rube isi n'iwu dị mkpa, nkwekọrịta, na usoro ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, nchịkọta ga-apụta na onye nchọpụta na-atụle ịchapụta ọdịnaya nke ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị ịgụ ma tụlee nkwekọrịta okwu-nke-ọrụ nke weebụsaịtị ahụ. Otú ọ dị, ọ nwere ike ịbụ ọnọdụ ebe ọ nwere ike imebi usoro ọrụ; cheta, Ịkwanyere Iwu na Mmasị Ọha Mmadụ ùgwù bụ naanị otu n'ime ụkpụrụ anọ. Dịka ọmụmaatụ, n'otu oge, Verizon na AT & T nwere usoro ọrụ nke gbochiri ndị ahịa ịkatọ ha (Vaccaro et al. 2015) . Echeghị m na ndị na-eme nchọpụta ekwesịghị ịbụ ndị ejiri okwu nkwekọrịta dị otú ahụ na-ejikọta ya. Dị ka o kwesịrị, ọ bụrụ na ndị nchọpụta emebi iwu nkwekọrịta, ha kwesịrị ịkọwapụta mkpebi ha n'ụzọ doro anya (lee eg, Soeller et al. (2016) ), dị ka atụpụtara site na nghọta ziri ezi. Mana nke a nwere ike ime ka ndị nchọpụta gbakwunye ihe ize ndụ iwu; dị na United States, dịka ọmụmaatụ, Usoro Ngwá Ọrụ na Njikere Kọmputa nwere ike ime ka ọ bụrụ iwu na-akwadoghị (Sandvig and Karahalios 2016; ??? ) nkwekọrịta nkwekọrịta-na-ọrụ (Sandvig and Karahalios 2016; ??? ) . Mgbe mkparịta ụka a dị nkenke gosipụtara, gụnyere ntinye na nyocha nke omume nwere ike ịjụ ajụjụ dị mgbagwoju anya.
Ke adianade nnabata, Ùgwù Iwu na Public Interest-agbakwa ume nghọta dabeere-aza ajụjụ, nke pụtara na-eme nnyocha kwesịrị doro anya banyere ihe mgbaru ọsọ ha, ụzọ, na-arụpụta na niile nkebi nke ha nnyocha ma na-ibu ọrụ n'ihi na ha na-eme. Ụzọ ọzọ ị ga-esi na-eche echiche banyere nghọta ziri ezi bụ na ọ na-anwa igbochi obodo nyocha ahụ ime ihe na nzuzo. Nkwupụta a doro anya na nghọta na-eme ka ọha na eze nwee nkwurịta okwu ọma, bụ nke dị mkpa maka ma ihe omume ma dị mkpa.
N'iji ụkpụrụ nke Ịkwanyere Iwu na Mmasị Ọchịchị mee ihe n'ihe ọmụmụ atọ ndị a tụlere na-egosi ụfọdụ n'ime ndị nchọpụta siri ike na-eche ihu mgbe a bịara n'iwu. Dịka ọmụmaatụ, Grimmelmann (2015) ekwuola na Emotional Contagion nwere ike ịbụ na iwu akwadoghị na State of Maryland. Karịsịa, Maryland House Bill 917, nke gafere na 2002, na-etinye iwu nchebe niile maka nchọpụta niile e mere na Maryland, n'enweghị enyemaka nke ego (ọtụtụ ndị ọkachamara kweere na Emotional Contagion adịghị n'okpuru Iwu Ụkpụrụ n'okpuru Iwu Federal n'ihi na e duziri ya na Facebook , ụlọ ọrụ na-adịghị enweta ego nyocha n'aka Gọọmentị US). Otú ọ dị, ụfọdụ ndị ọkà mmụta kwenyere na Maryland House Bill 917 bụ ihe na-ezighị ezi (Grimmelmann 2015, 237–38) . Ndị na-eme nchọpụta na-elekọta mmadụ abụghị ndị ikpe, ya mere, ha enweghị ike ịghọta na nyochaa iwu iwu nke iwu 50 niile US. Ihe omuma ndia di iche iche n'olu ndi mba uwa. Dị ka ihe atụ, dịka ọmụmaatụ, gụnyere ndị sonyere site na mba 170, bụ nke na-eme ka iwu kwadoro siri ike. Na nzaghachi na gburugburu iwu iwu, ndị na-eme nchọpụta nwere ike irite uru site nyochaghachi omume ọma nke ndị ọzọ na-arụ ọrụ ha, ma dịka isi iyi maka ndụmọdụ banyere iwu gbasara ya na dịka nchekwa onwe onye ma ọ bụrụ na nchọpụta ha bụ iwu na-akwadoghị.
N'aka nke ọzọ, ihe ọmụmụ atọ nile bipụtara nsonaazụ ha na magazin agụmakwụkwọ, na-enye aka ịmepụta ngosipụta nke nghọta. N'ezie, e bipụtara Mmetụta Contagion n'ụzọ dị irè, ya mere a gwara ndị na-eme nchọpụta na ndị ọha na eze ọha na eze-mgbe eziokwu ahụ gasịrị-banyere atụmatụ na nsonaazụ nke nchọpụta ahụ. Otu ụzọ dị ngwa na iji eme ihe iji chọpụta ngosipụta nke nghọta bụ ịjụ onwe gị: Ọ ga-adị m mma ma ọ bụrụ na edere m usoro nyocha banyere n'ihu ihu akwụkwọ akụkọ obodo m? Ọ bụrụ na azịza ahụ bụ ee, mgbe ahụ, ọ bụ ihe ịrịba ama na nyocha ime nnyocha gị nwere ike ịdị mkpa mgbanwe.
N'ikpeazụ, Belmont Report na Menlo Report kwupụtara ụkpụrụ anọ nwere ike iji nyochaa nyocha: Ịkwanyere Ndị mmadụ, Uru, Ikpe ziri ezi, na Nkwanye Maka Iwu na Mmasị Ọha Mmadụ. Itinye ụkpụrụ anọ ndị a n'ọrụ na-adịghị adị mfe mgbe nile, ọ pụkwara ịchọ nkwekọrịta siri ike. Dịka ọmụmaatụ, gbasara mkpebi ahụ ma ọ bụ ma ọ bụ ndị na-esoghị na Emotional Contagion, enwere ike ịtụle ya na Ịkwanyere Ndị mmadụ ùgwù nwere ike ịkwalite okwu mkparị, ebe Mmasị na-egbochi ya (ma ọ bụrụ na akwụkwọ nkwekọrịta ahụ nwere onwe ya). Enweghị ụzọ ọ bụla a ga-esi edozi ụkpụrụ ndị a, ma ụkpụrụ anọ ahụ na-enyere aka ịmepụta ahịa, kwadoro mgbanwe na nyocha nchọpụta, ma mee ka ndị na-eme nchọpụta kọwaara onye ọ bụla na ọha mmadụ echiche ha.